Mozilla dia efa namoaka ny kinova Firefox 74 vaovao ary ireo no fanovana lehibe indrindra | Avy amin'ny Linux
Vao tsy ela akory izay dia namoaka ny kinova Firefox 74 vaovao i Mozilla ho an'ny sehatra Windows, Mac ary Linux. Ity kinova vaovao ity tsy misy fiovana be dia be, na izany aza dia misy fiovana lehibe sasany ary fanatsarana ho an'ny mpamorona sy ny mpampiasa farany.
Iray amin'ireo fanovana lehibe ireo ohatra ny fanapaha-kevitra noraisin'i Mozilla sy ireo tranonkala hafa hanaparitahana ny fenitra TLS 1.0 sy 1.1 taloha amin'ny vokatrao manomboka amin'ity taona ity.
Mozilla, nandritra izany fotoana izany, dia nanomboka nanala ny TLS 1.0 sy 1.1 tao amin'ny Firefox Nightly tamin'ny taon-dasa. y nanala ny fanohanan'ireto protokolà encryption ireto ao ny kinova miorina amin'ny Firefox 74. Manomboka amin'ity famoahana ity dia mampiseho hafatra lesoka "tsy azo antoka ny fifandraisana azo antoka" i Firefox rehefa manohana TLS 1.1 na ambany fotsiny ny tranonkala iray.
Fiovana hafa izay efa nambaran'i Mozilla sy nanolorany izany dia ny fanesorana ireo fanitarana manimba avy amin'ny tranokalanao ary koa ireo izay tsy mahafeno ny fepetra takiny amin'ny lafiny fiarovana sy fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa.
Firefox 74 izao dia manana lalàna henjana kokoa ho an'ny add-ons, ary ny fanitarana napetraky ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia afaka esorina amin'ny mpitantana plugin.
Amin'ny lafiny iray hitantsika fa nanampy ny fikirakirana "browser.tabs.allowTabDetach" mankany "about: config" hisorohana ny vakizoro tsy hiala amin'ny windows vaovao.
Ny fahatapahana tampoka tab iray dia iray amin'ireo lesoka manelingelina indrindra amin'ny Firefox, nesorina nandritra ny 9 taona. Satria mamela ny hisintona ny kiheba miaraka amin'ny totozy ny mpitsikilo, fa amin'ny toe-javatra sasany, dia tapaka ao anaty varavarankely mitokana ilay takelaka ary mandritra ny fiasa rehefa mihetsika tsy am-piheverana ny totozy rehefa manindry ny kiheba.
Ny fampidirana RLBox dia nasongadina ihany koa, izay tranomboky iray izay nampiana mba hiarovana ny browser manohitra ny fanararaotana ny fahalemen'ny tranomboky antoko fahatelo. RLBox dia manangona ny kaody C / C ++ avy amin'ny tranomboky mitokana ho kaody mpanelanelana amin'ny WebAss Assembly avo lenta, izay avoaka ho modely WebAss Assembly, ary ny fahefany dia napetraka hamatotra an'ity maody ity fotsiny.
Ny maoderina voaangona dia miasa amin'ny faritra fitadidiana mitokana ary tsy manana fidirana amin'ny ambin'ny haben'ny adiresy.
Anisan'ireo fiovana miavaka hafa natolotry ny Firefox 74, dia afaka mahatsikaritra isika:
Tsiambaratelo tsara kokoa ho an'ny antso am-peo sy horonan-tsary amin'ny Internet misaotra amin'ny fanohanan'ny mDNS ICE amin'ny alàlan'ny fametahana ny adiresy IP.
Ny fanitarana Facebook Container ho an'ny Firefox izao dia mamela ny manampy tranokala fanao ao anaty kaontenera.
Firefox Lockwise izao dia manohana ny fampidirana Reverse Alpha Sort (ZA);
Fangatahana geolocation, fampisehoana efijery feno, fanombohana fakantsary, mikrô, pikantsary fiampitana dia tsy mandeha ho azy intsony izao
Fanatsarana fanatsarana ny tsoratadidy sy ny Microsoft Edge amin'ny fitaovana Windows sy Mac.
Mikasika ny vaovao ho an'ireo mpamorona:
Hetsika lingagechange_even vaovao nampiana ary ny fananana onlanguagechange mifandray amin'izany, izay ahafahanao miantso ny mpikarakara rehefa manova ny fiteny interface ny mpampiasa.
Ny lohateny HTTP Feature-Policy dia alefa amin'ny alàlan'ny default, izay ahafahanao mifehy ny fitondran-tenan'ny API sy mamela ny endri-javatra sasany.
Ao amin'ny interface ho an'ny fizahana ny pejin-tranonkala dia aseho ny fampitandremana momba ny fananana CSS miorina amin'ny singa z-index, ambony, havia, ambany ary tsara.
Ahoana ny fametrahana ny kinova Firefox 74 amin'ny Linux?
Na ny fametrahana ny browser dia azon'izy ireo atao amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity:
Ankehitriny ho an'ireo mpampiasa Fedora na fizarana hafa azo avy aminy, sokafy fotsiny ny terminal ary soraty eo amboniny ity baiko manaraka ity (raha efa manana kinovan'ny browser efa napetraka ianao):
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mozilla dia efa namoaka ny kinova Firefox 74 vaovao ary ireo no fanovana lehibe indrindra
esk dia hoy izy:
[…] Ohatra ny fanapaha-kevitra noraisin'i Mozilla sy ireo tranonkala hafa hanaparitahana ny fenitra TLS 1.0 sy 1.1 taloha […]
Mihoatra: mampihena na mampihena ny sanda na ny vidin'ny zavatra iray.
Mamaly an'i esk